KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Dhaqaalaha Soomaaliya oo Sare u kacay 2014 & DFS oo wali ku tiirsan Kaalmada Caalamka
Friday 19 June 2015 16:12
Dhaqaalaha Soomaaliya oo Sare u kacay 2014 & DFS oo wali ku tiirsan Kaalmada Caalamka
Washington (KON) - Hay'adda Lacagta Aduunka (IMF) ee fadhigeedu yahay Washington, D.C. ayaa ku sheegtay Warbixin ay soo saartay in Dhaqaalaha Dalka Soomaaliya sameeyay Sare u kac 2014.
IMF ayaa warbixin si qoto-dheer uga hadashay Kororka Dhaqaalaha Soomaaliya oo sare u kacay 3.7% Sanadkii tagey ee 2014, markii uu Dalka Dowladda Rasmi ah yeeshey muddo 25 Sano ah.
Warbixintan ayaa ah mid wanaagsan oo ka tarjumaysa in Soomaaliya dib uga usoo kabanayso Colaaddii & Dowlad la'aanta Mudada dheer kusoo jirtay.
Waa Koror aad u wanaagsan 3.7%, inkasta oo uusan gaarin Dalalka kale ee dariska la ah Soomaaliya sida Kenya & Ethiopia.
Dhinacyada wax soosaarka Beeraha, Dhismooyinka Xowliga ku socda iyo Isgaarsiinta hana qaaday Mudooyinkii danbe.
Xagga sicir bararka warbixinta waxa ay tilmaameysaa in sanadkii 2013-ka uu ahaa 1.3 %, halka sanadkani uu gaari karo boqolkiiba illaa 4% , halka kororka dhaqaalaha uu sanadkani ku darsami karo illaa 2.7% boqolkiiba.
“Horumarka laga sameeyey dhanka amniga iyo abaaraha ayaa u sabab ah sare u kaca, kororka waxa uu gaari karaa 5%,” ayaa lagu yiri warbixinta IMF.
Warbixintani ayaa waxa ay soo baxdey kadib wadahadalo dhexmaray hey’adda iyo wasiirka maaliyadda Maxamed Aaden Fargeeti , Wasiir ku xigeenka qorsheynta Cabdullaahi Sheekh Cali, iyo Maareeyaha bangiga dhexe Bashiir Ciise Cali.
Hase ahaatee, Dowladda Soomaaliya ayaa wali si weyn ugu tiirsantahay Kaalmada Dhaqaale ee Caalamka, oo aan awoodin inay bixiso Mushaaraadka Shaqaalaheeda & Ciidankeeda oo Mudo Bilooyin ah wax qaadan.
IMF waxay ugu baaqday Dowladda Soomaaliya inay xoojiso Hay’adaha lacagta iyo sare u qaadista Canshuur Uruurinta Badda, Cirka & Barriga, si dalka uu u gaaro isku filnaansho.